Tag: fampiroboroboana ny vokatra kosmetika | Martech Zone
Tag: fampiroboroboana ny vokatra kosmetika
Ahoana ny fiantraikan'ny fonosana vokatra amin'ny traikefan'ny mpanjifa
Alarobia 18 Janoary 2017 Douglas Karr
Andro manokana ny andro nividianako ny MacBook Pro voalohany. Tadidiko ny fahatsapako fa tsara ny nanamboarana ilay boaty, ny fomba nanehoana tsara ny solosaina finday, ny toerana misy ny kojakoja… namboarina tamina traikefa tena manokana. Manohy mieritreritra aho fa Apple dia manana ny sasany amin'ireo mpamorona fonosana vokatra tsara indrindra eny an-tsena. Isaky ny manafoana ny boaty misy azy ireo aho dia traikefa iray. Raha ny marina, be loatra ka